Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	8 Aprili 2020	• 5 Comments
Kwiintsuku zamva nje bendinemibuzo emininzi malunga noDavid Icke kunye nodliwanondlebe wakhe waseLondon, kuba I-BBC ibikhuthaze iYouTube ukuba isuse udliwanondlebe, apho YouTube yakwenza oku. Le vidiyo kuthiwa yatsala izigidi zababukeli kwisithuba seeyure ezimbalwa, kodwa yahlolwa. Kuba uDavid Icke ngoyena mntu ucinga kakhulu emhlabeni odumileyo, […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	7 Aprili 2020	• 7 Comments
Ewe kunjalo! Sikhona. Jonga nje ingqungquthela yabezindaba kaMark Rutte kunye noHugo de Jonge malunga namanyathelo amatsha e-coronavirus. Kuhamba kanye njengoko bekulindelwe. Jonga nje into abathengise ngayo abantu ngohlobo oluhle loboya. Nantsi into esiya kuyifumana: Umthombo kunye nonxibelelwano lokutsala umkhangeli ngokusetyenziswa kwemilinganiselo kwaye ulinganise ntoni […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	7 Aprili 2020	• 17 Comments
Ngenxa yokuba isantya sokuphuhliswa kwe-coronavirus criris ngokukhawuleza kakhulu, phantse akunakwenzeka ukugcina phezulu. Nangona kunjalo, ndifuna ukunika ingcaciso kwinqanaba ledabi. Oku kuqala ngesishwankathelo seminyhadala ethile. Nangona kunokuba nzima ukuhlala unethemba ngeli xesha lokutshintsha okukhulu kunye nethemba […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	4 Aprili 2020	• 33 Comments
Kukho isizathu esilula sokuba usithi intsholongwane ngokubanzi ayinosulelo kwaye kutheni imovie ezinje ngezantsi yeli nqaku ziimifanekiso bhanyabhanya ezihonjiswe kakuhle. Kungenxa yokuba intsholongwane ayinakonakala okanye ihambe yodwa; Ayisiyi-bacterium, […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	1 Aprili 2020	• 51 Comments
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	31 Matshi 2020	• 18 Comments
Okwangoku imibuzo emininzi ivela ngoku: “Ucinga ukuba iivenkile kunye neeresityu ziya kuvulwa nini kwaye ungaya kwakhona kwiholide? Ndicela oku kuba umyeni wam ukwishishini lokwamkela iindwendwe. ” okanye “Uziva njani malunga nentengiso yezindlu? Ngaba kububulumko ukuthengisa indlu yam? ", Kodwa []
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.472.733